खबर Archives - Page3of 13 - Purbeli News
English खबर	सुटिङ गर्दागर्दै प्रियङका बेहाेस भएपछि …	काठमाडौं/ फिल्म ‘राधे’को एक गीत छायाँकनको क्रममा अभिनेत्री प्रियंका कार्की बेहोस भएकी छिन् । ‘हिउँ’ सहितका दृश्य कैद गर्द दोलखाको कालिञ्चोकमा ‘राधे’ युनिट पुगेको थियो । फिल्ममा समावेश हुने ‘मान्छे हुँ म बाट नी गल्ती हुनसक्छ’ बोलको गीत छायाँकन हुँदै गर्दा निखिल उप्रेतीसँग कम्मर मर्काउँदै गरेकी प्रियंका एक्कासी बेहोस भएपछि केहि समय छायाँकन नै प्रभा...	तेरिया जन्मिदा खुशी थिएन परिवार : कारण यस्ताे थियाे	काठमाण्डाै । सन् २००२ मा रुपन्देहीको रुद्रपूरमा जन्मेकी तेरिया फौजा मगरले भारतको चर्चित रियालिटी सो झलक देखला जा सिजन ९ को उपाधी हात पारेपछि थप चर्चामा छिन् । तेरियाले भारतमा मात्रै हैन आफ्नो कलाबाट विश्वमै नेपालको शान बढाएको भन्दै धेरै नेपाली गर्व गरेका छन् ।
त्यस्तै उनको परिवार पनि तेरिया जस्तो सन्तान पाएर निकै खुशी छ । तेरियासँगै झलकमा पुगेक...	अमिर खानको सेक्स भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल: श्रीमती तनावमा	एजेन्सी / पाकिस्तानी मुलका बेलायती बक्सर आमिर खानको सेक्स भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । भिडियो सार्वजनिक भएसँगै उनको वैवाहिक जीवन संकटमा परेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
पाकिस्तानी मुलका आमिरको महिला बक्सरसँग स्काइप च्याटमा अश्लिल हर्कत गर्दै गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको हो ।
आमिरले लण्डन ओलम्पिकमा बेलायतलाई रजत पदक दिलाएका थिए । से...	अाफै माथी छानबिन गर्नुस भन्दै दिपक र दिपाले दिए प्रहरीमा उजुरी : कारण यस्ताे छ !	काठमाडौं। आफैंमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै कलाकार दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलासहित फिल्म ‘छक्का पञ्जा’ निर्माण समूहले गौशालाको महानगरीय प्रहरी वृत्तमा शनिबार निवेदन दर्ता गराएको छ ।
नवलपरासी स्थायी घर भई काठमाडौंको सिनामंगलमा बस्दै आएका कृष्ण सुवेदीले छक्का पञ्जा पाइरेसीम संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीबाट सफाइ पाइसकेपछि पनि गत पुस २८ गते ‘रहस्यम...	थिएटर मलमा एउटा लोग्नेको कथा ‘बेड नं ९९’	काठमाडौं । थिएटर मल नाटकघर यसपटक अस्पताल बनेको छ । थिएटर मलमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको नाटक ‘बेड नं. ९९’ ले नाटकघरलाई अस्पतालको रुप दिएको हो । माघ ७ शुक्रबार प्रिमियर गरिएको नाटक ‘बेड नं ९९’ महेशविक्रम शाहको कथालाई घनश्याम श्रेष्ठले नाटको रुप दिएका हुन् । मनोवैज्ञानिक शिल्पमा पोख्त कथाकार शाहको यस कथालाई नाटकमा पनि निर्देशक श्रेष्ठले मनोवैज्ञानिक ...	अर्को ठूलो उपाधि नजिक तेरिया,यसरी गर्नुहोस् भोट	काठमाडौँ। बुटवलकी तेरिया फौजा मगर भारतमा फेरि अर्को उपाधि नजिक छन्। सन् २०१२ मा भारतीय टेलिभिजन च्यानल जी टीभीबाट प्रशारित डान्स रियालीटी सो डीआइडी ३ को विजेता भएकी तेरिया अर्को रियालिटी सो झलक दिखलाजाको फाइनल पुग्दै अर्को ठूलो उपाधि नजिक पुगेकी हुन्। माघ ८ गते हुने फाइनलमा तेरियालाई जिताउन यतीबेला फेरि नेपालीहरू जुटेका छन्। अहिले बुटवलसहित अधिका...	यी हुन यम बुद्धको मृत्युबारे उठेका मूल सात प्रश्न	चर्चित नेपाली र्‍यापर यम बुद्धको लन्डनमा रहस्यमय निधन भएपछि विभिन्न प्रश्न सतहमा आएका छन्। उनका कतिपय प्रशंसकले घटनाबारे अझै शूक्ष्म अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। हेरौं, अहिलेसम्मका समाचार विवरणका आधारमा यम बुद्ध निधनबारे उब्जेका मूल सात प्रश्न–
लन्डन साउथ ह्यारो नजिक फिल्ड...	पति यमबुद्धले आत्महत्या गरेपछि श्रीमती अस्मिताले पहिलो पटक मुख खोलिन	काठमाडौँ । श्रीमती अस्मिता सेढाईंसँगै बस्दै आएका अधिकारीको मृत्युभएको चारदिन पछि उनकी पत्नी अस्मिता सेढाईले मुख खोलिन । थप भिडियोबाट ओएस नेपालको सहयोगमा यमबुद्धको पोष्टमार्टम रिपोर्ट बाहिरियोः डाक्टरको यस्तो दाबी	काठमाडौं । यमबुद्ध अर्थात अनिल अधिकारी हामीमाझ छैनन् । उनको आत्महत्याको समाचारले सबैलाई स्तब्ध बनायो । सबैजनाले यमबुद्ध जस्ता व्यक्तिले आत्महत्या गर्नै सक्दैनन् भनिरहेका बेला उनको मृत्युको कारण जान्न सबैजना उत्सुक पनि छन् । यसैबिच गत सोमबार यमबुद्धको पोष्ट मार्टम भयो जसको रिपोर्ट बाहिरिएको छ ।
पोष्टमार्टम रिपोर्टबाट चिकित्सकले मौखिक रुपमा उनले आत्...	मृत्यु अघि श्रीमतीलाई गायक यमबुद्धले यसो भनेका थिए	काठमाडौँ । चर्चित र्यापर तथा गायक यमबुद्धले आत्महत्या गर्नु केही दिन मात्रै अगाडी फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै अब केही दिनमा नयाँ कोशली आफ्ना दर्शकका लागी उपहार दिने सोचमा रहेको भन्दै पोष्ट गरेका थिए ।
नयाँ एल्बम समेत ल्याउने तयारीमा रहेका उनको निधनको यथेष्ट खबर नआए पनि उनी सहित बेलायतमा उनकी श्रीमती पनि बस्थिन् । आत्महत्याका विषयमा प्रहरीले थप अनुसन्धा...	‹१२३४५›»